Ndeipi nzira dzakasimba dzokuvaka yakakwirira PageRank backlinks?
Vanhu vose avo vanotaurirana nehuwandu hwekuchengetedzwa kweiwebsite uye kudhinda kwemasitendi vanoziva zvinonzi backlinks uye kuti vanogona sei kuvandudza webhusaiti SEO uye kusimudzira nzvimbo yepamusoro paSERP. Zvisinei, hazvisi zvose zvakakosha zvakakosha zvakadai semhando imwe kubva kumusoro PageRank sites.
Chii chiri kumusoro PageRank backlink?
Link Building inoreva nzira apo iwe unowedzera nzvimbo yako kana bhurogi rekubatanidza kune imwe webhusaiti munyaya yaunofunga kuti hukama hunokosha kune vanoverenga nguva dzose uye dzimwe nguva vashandisi vewebhu. A high PageRank backlink is an external link inobva kune imwe nzvimbo yepamutemo yewebhu inoramba ichidzingwa neGoogle bots. Ko iwe paunowedzera nzvimbo yako kana bhujirano cheku blog kune imwe niche yakabatana nenyaya yewebhu paunotarisa paGoogle Page Rank uye Domain Authority. Mumazuva edu, inonzi "high-quality backlink".
Pamusoro penheyo yemushandirapamwe wako wekuvakisa, unoda kuwana niche dzakafanana dzine mawebhusayithi anotarisana nemashoko ekutsvaga saiwo domain yako uye nekutumirwa kwemafora, kugoverana kwevaeni kana kuti mapeji makuru ekumburudza kune vamwe kuti vawane PageRank inosangana newebsite yako.
Panzvimbo inotevera, unofanirwa kutarisa maitiro ese anokosha ewebsite kana bhulogi waungada kuwana masaini kubva. Unogona kuwana zvakawanda zvema software uye zvekushandisa paIndaneti inobvumira kutarisa matriciti yepaiti pasina. Zvisinei, havasi vose vari vehupamhi hwepamusoro. Ndinokukurudzira kuti ushandise Semalt Web Analyzer, MozRank, uye Google Pagerank. Izvi zvishandiso zvepaIndaneti zvisingakubatsiri zvichakubatsira kutarisa webhutori simba uye PageRank.
Nzira dzekutsvaga nheyo dzekambani dzakabatana
Blog commenting ndeimwe yenzira dzakanakisisa uye dzine simba zvikuru kuti uvakwe nepamusoro-soro kunze kwehutano kune site yako kana blog. Iyo inogona kutyaira yakawanda yemigwagwa inotarirwa kune yako yepaiti yekusununguka. Chinhu chose chaunoda ndechokuti uwane web source iyo iyo yakanyatsoenderana nekambani yako uye yekarakiti niche. Kuti uone mabhuku ekubvuma mabhulogi, unoda kuisa mibvunzo inotevera muGoogle search box: "yako keyword inurl:. com, "" yako keyword "site:. edu inurl: blog "post comment," "keyword" site:. gov inurl: blog "post a comment. "
Mumiriridzi wekugadzira mabhuku
Imwe yenzira dzakakurumbira uye dzepaduku yekuvaka PageRank backlinks mushanyi kugovera. Iwe unoda kuwana bhuti rinoenderana nehurukuro yako yehurukuro uye bvunza pamusoro pekudhinda nyaya yako ipapo. Kana iyo yakasarudza yawakasarudza inowanikwa yako inobatsira, ichaiparidzira, uye iwe unotora mhando yakasanganiswa jisi pamwe nekuwana mukana wekuvandudza maratidziro ako. Kuti uwane vaeni mabhurogi mabhidhiyo, unogona kutsvaga Google nezvemibvunzo inotevera: "yako keyword" munyori wevanyori, "yako keyword" mushumo wekunyora mushumo we "blog", "keyword" yenyaya yako kana kuti "yako keyword" ipei imwe nyaya.
ini ndikuudze pamusoro pekuti iwe unogona sei kukwidziridza nepamusoro pe PageRank backlinks yeblogi yako kana kuti yepaiti uye uende ku TOP pane zvitsvaga. Saka, kana uchida kuwedzera bhaibheri rako kana nzvimbo yepaiti, ruzivo urwu ruchakubatsira iwe Source .